Saddax nin iyo saddax Libaax
Waxaa la yiri , saddax nin ayaa safar wada galay. Nimanka midkood fulay buu ahaa,
midna geesi buu ahaa, midka kalena nin caqli badan buu ahaa. Nimankii iyaga oo jidka isla socda ayaa waxaa ka hor yimid saddax libaax oo kala ahaa mid weyn iyo laba yaryar, waxaana nimankii gashay cabsi lama filaan ah.
Ninkii fulayga ahaa ayaa intuu kaadi isku sii daayay ayaa isaga oo gariirayay yiri. ”War aynnu ka cararno libaaxyada”. War libaaxu nin waa ka dheereeyaa cagana loogama baxsan karo ee aynu iska dhicino buu yiri kii geesiga ahaa, markaas buu intuu ku soo dhawaaday ku yiri libaaxyadii , ”War libaaxyow i maqla, labadan nin mid waa caato oo waa laf iyo harag ma istaahilo in la dilo sababtoo ah wax laga cuno oo hilib ah ma leh. Midka kalena waxba kama roona isna waa weyd.
Saddexda nin aniga ayaa ugu buuran marka bal idinku ku soo heshiiya kii aniga i cuni lahaa?
iyo kii cuni lahaa ninka caatada ah?
Libaaxyadii waxaa dhex martay dood adag mid waliba wuxuu yiri anigu ayaa cunaya ninka buuran.
Markii ay ku heshiin waayeen ayaa libaaxii weynaa oo caro isheyn kari waayey ayaa markaas dilay labadii yaryaraa. Markaas buu ninkii ku yiri, ”Sow ma aragtid sida aan u galay labadii libaax ee yaryaraa, hadaba aniga ayaa ku cunaya ee isa soo diyaari”. Ninkii wuxuu yiri ”, waa hagaag ee wax yar i sug. Intuu saaxiibadiis ku yiri warankiina diyaarsada ayey saddexdii nin isugu tageen libaaxii oo ku dileen goobtaas”.
Ninkii cagliga badnaa ayaa waxaa uu ku yiri: wada jirku waa xoog, far keligeedna fool ma dhaqdo. Sidaas ayaana maanta ku badbaadnay.
Maxaa ay saddaxdii nin la kulmeen ?
Libaaxyadu meeqa ayey ahaayeen ?
Libaaxyadii maxaa ku dhacay markii ay la kulmeen saddexdii nin ?
Ninkii aqliga badnaa maxaa uu yiri ?